Dowladda Sudan oo dalkeeda ka mamnuucday khudaarta iyo xoolaha looga keeno Masar – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Sudan oo dalkeeda ka mamnuucday khudaarta iyo xoolaha looga keeno Masar
Dowladda Sudan ayaa maalintii shalay shaaca ka qaaday inay dalkeeda ka mamnuucday dhamaan khudaartii iyo xoolihii laga keeni jiray dalkaasi Masar.
Shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee dalka Sudan ayaa lagu wargeliyay in khudaarta iyo xoolaha ay soo geliyaan dalkaasi inay si toos ah uga soo gataan dalalka asalka ah, balse aan lasoo marsiin dalka Masar.
Illaa iyo haatan ma jirto wax faah-faahin ah oo ay dowladda Sudan ka bixisay sababta keentay in dalkeeda ay uga mamnuucdo khudaarta ugu badan iyo sidoo kale xoolaha uga imaan jiray dalkaasi Masar.
Waxaa muddooyinkii ugu dambeysay sii xumaanayay xiriirka ka dhaxeeya labada dal, kadib markii dowladda Masar ay canshuuraha ku kordhisay shirkadaha laga leeyahay dalkaasi Sudan iyo inay adkeysay fiisooyinka dal ku galka ah oo ay qaadan jireen shacabka u dhashay Sudan.
Dowladda Sudan ayaa horey ugu eedeysay xukumadda Masar ee uu hoggaamiyo C/fitaax Al-SiSi inay si hoose u taageerto jabhado mucaarad ku ah dowladda Sudan ee uu hoggaamiyo Cumar Xasan Al Bashiir.
Sidoo kale, Masar iyo Sudan ayaa isku heysta dhul ku yaalla xaduuda u dhaxeeysa labadaasi dal.
Dowladda Sudan ayaa sidoo kale sheegtay inay dib u dhigtay safar uu todobaadkaan gudihiisa magaalada Qaahira ku tagi lahaa wasiirkooda arrimaha dibada, si loo xaliyo muranka kala dhaxeeya labadaasi dal.